Nwụrụ na Nọvemba, nke Guillermo Galván dere. Nyocha | Akwụkwọ ugbu a
Anwụ na Nọvemba, nke Guillermo Galván dere. Nyochaa
Ọnwụ na Nọvemba bụ akwụkwọ akụkọ ikpeazụ nke Guillermo Galvan. N'ahịa kemgbe ụbọchị ikpeazụ 13, ọ bụ akụkọ nke atọ na-eme egwuregwu onye nchọpụta Carlos lombardi, mgbe Mowing oge y Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke ọkpọ. Ma n'ezie a ga -enwe ihe ọzọ n'ihi na Galván achọtala ezigbo usoro ebe ọ na -agwakọta atụmatụ na -atọ ụtọ, ọnọdụ dị mma yana mkpụrụedemede siri ike. Nke a bụ nke m nyocha.
2 Ọnwụ na Nọvemba
3 Lombardi na Madrid mgbe agha gasịrị
Onye edemede na onye nta akụkọ Valencian nwere ogologo ọrụ edemede na nkwado nke ndị nkatọ na ndị na -agụ ya, o nwere aha kredit ya dị ka Onyunyo nru ububa: The Epic of Leovigildo, Eze nke Visigoths, Tupu m asị gị nke ọma, Site na ntụ, Anya nke Saturn, Ikuku na -ahapụ ihe ọ bụla o Kpọọ m judas. N’afọ 2019, ọ malitere ihe bụ usoro ugbu a nke akwụkwọ akụkọ 3 nke onye bụbu onye uwe ojii na onye nyocha Carlos Lombardi, nke wetara ya nnukwu ihe ịga nke ọma.
Abịarutere m Guillermo Galvan ekele enyi m, onye nyere m nlele nke Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke ọkpọ. Mana ebe ọ bụ na m na -amalitekarị usoro na mbido, ejidere m Mowing oge. Ihe si na ya pụta: ee Enwere m mmasị na Madrid ahụ site na mmalite 40s kọwara nke ọma site na mkpụrụedemede akọwara nke ọma, ma ndị isi na nke abụọ, n'ime nkata dị mma nke ukwuu.
Ugbu a, na ejiji nke ịkpọ ihe niile aha, a na -akpọ subgenre a ọchịchị aka ike noirya bụ, akwụkwọ akụkọ nwere atụmatụ ndị uwe ojii etinyere na Nazi Germany (dị ka nke Bernie Gunther, Philip kerr), Soviet Union (Arkady Renko, nke Martin Cruz-Smith) ma ọ bụ, n'ihe banyere Galván, Spain Franco n'oge agha.
En Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke ọkpọ Galván bufere ihe ahụ n'obodo, ọkachasị Aranda de Duero, na -etolite akara ọzọ nke ụdị, nke obodo ojii. Ọ gara n'ihu na -edobe mmanya na -agbadaghị na akụkọ ọhụrụ a.
Ọnwụ na Nọvemba
Anyị nọ na Madrid dị afọ 42, Agha Ụwa nke Abụọ zuru oke na Europe na ọnọdụ dị ụkọ, ọchịchịrị na mkpa mgbe agha gasịrị ebe a. NA Carlos lombardi, onye bụbu onye uwe ojii ma na -arụ ọrụ ugbu a na ụlọ ọrụ nyocha Hermes, na -etinye aka na nyocha nke ikpe abụọ na -enweghị mmekọrịta ọ bụla: nke efu nwa amaala German na nchọpụta ozu nke nwa agbọghọ mmiri riri.
N'otu oge ahụ, anyị maara ihe gbasara gị akụkọ gbasara onwe, na mmalite ebe nwunye mbụ ya Begoña yiri ka ọ dokwuo anya ọnọdụ ha chọtara onwe ha. Ha ka nọkwa ebe ahụ otu dị irè na -eguzosi ike n'ihe nke ndị ọrụ ibe ha na onye isi ha na enyi ha Balbino Ulloa.
Na na Madrid nke nwere isi awọ karịa ọkụ enweghị ụkọ Ndị Gestapo, na AbwehrNdị ọrụ ọgụgụ isi Britain na ọbụna ndị nke Pinkerton Amerịka Na -esonye ụfọdụ onye ọchụnta ego site na ebe dị oke elu, yana onye na -akwado Lombardi, onye ga -ekpughere ozi nkeonwe ka ọ dị mkpa ka ọ na -agbagha onye nchọpụta. Ha niile na -adaba n'otu ibé ebe ha na -agwakọta ịgba akwụna, sinima, ahịa ojii na nledo, mana nkwubi okwu ya pere mpe.
Lombardi na Madrid mgbe agha gasịrị
N'ihi na ihe ndị ọzọ bụ nnukwu ibu dị iche na akwụkwọ akụkọ a. Lombardy, n'ihi nzụlite ya juputara na ya ọnụma na njigide n'otu oge tupu ọnọdụ obodo ahụ na ndụ n'ihe karịrị isi awọ nke Madrid nwere ihe na -esi na ya pụta mgbe agha obodo gasịrị.
Achọpụtaghị ya mana ọ na -adị ndụ dịka o nwere ike na a nguzo siri ike n'etiti oge gara aga mgbe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ na ọhụụ nke yiri ka ọ na-emeghe na njedebe nke akwụkwọ akụkọ ahụ. Ma ha bụ anya ya na -egosi anyị na Madrid, nọ n'ọnọdụ kacha mma na Galván na -emegharị, ọ na -apụtakarị nke ọma n'ihi akụkọ dị ugbu a nke na -ebute ihe omume na onyonyo nso mgbe niile. Ihe dị mma karịadịdị anyị ndị na -anaghị enwe ọmịiko na nke ahụ akụkọ dị ugbu a kechie anyị na a ọmarịcha njikwa nakwa asụsụ.
una ihe mgbaze akụkọ ihe mere eme nke na -agwakọta ndị uwe ojii, akụkọ ihe mere eme na ụdị nledo. Ma n'ezie a ga -enwe ihe ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Anwụ na Nọvemba, nke Guillermo Galván dere. Nyochaa